Shuruudaha iyo Xaaladaha • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Fadlan si taxaddar leh u akhri Shuruudaha Adeegsiga ("Shuruudaha", "Shuruudaha Adeegsiga") ka hor intaadan isticmaalin degelka dutchtownstl.org ("Adeegga") ay maamusho DT2 • Downtown Dutchtown ("annaga", "annaga", ama "kuweenna") ).
Helitaankaaga iyo isticmaalka Adeegga wuxuu ku xiran yahay aqbalaaddaada iyo u hoggaansanaanta shuruudahaan. Shuruudahaan waxay khuseeyaan dhammaan martida, dadka isticmaala iyo kuwa kale ee isticmaala ama adeegsada.
Adiga oo adeegsanaya ama isticmaalaya Adeegga aad ku raacsan tahay in lagu xidho shuruudahaan. Haddii aadan ku raacsaneyn qeyb ka mid ah shuruudaha markaas ma heli kartid adeegga.
Markaad nala samayso xisaab anaga, waa inaad na siisaa macluumaadka saxda ah, dhammeystiran, iyo waqtigan mar kasta. Ku guuldareysiga in uu sidaas sameeyo wuxuu ka dhigan yahay jebinta Shuruudaha, taas oo keeni karta in si deg deg ah loo joojiyo koontadaada adeegeena.
Adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta sirta aad isticmaasho si aad u hesho Adeegga iyo waxqabadyo ama ficil kasta oo hoos yimaada lambarka sirta ah, haddii eraygaaga sirta ahi uu la joogo Adeeggeena ama adeega saddexaad.
Waxaad ogolaatay inaadan shaaca ka qaadin sirtaada dhinac saddexaad. Waa inaad si deg deg ah noogu soo sheegtaa markaad ka warqabto wixii jebin ah ee amniga ama isticmaalka aan fasax laheyn ee koontadaada.
Isku-xiryada Shabakadaha Internetka ee kale
Adeegayagu wuxuu ka koobnaan karaa xiriiriyeyaal bogag ama dhinacyo gacan saddexaad ah oo aan lahayn ama maamulin DT2 • Downtown Dutchtown.
DT2 • Downtown Dutchtown malahan wax xakameyn ah, mana qaadayaan wax masuuliyad ah, waxa ku jira, siyaasadaha asturnaanta, ama ku dhaqmida websaydh ama adeegyo dhinac saddexaad ah. Waxaad sii qiraysaa oo aad ku raacsan tahay in DT2 • Downtown Dutchtown aysan masuul ka noqon doonin ama mas'uul ka ahayn, si toos ah ama si dadban, wixii waxyeelo ama lumis ah oo ay sababto ama lagu eedeeyo inay sababtay ama la xiriirtay adeegsiga ama ku tiirsanaanta wixii ku saabsan waxyaabahaas, badeecadaha ama adeegyada la heli karo on ama loo maro mid ka mid ah websaydhada ama adeegyadaas.
Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad aqriso shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadaha gaarka ah ee boggaga internetka ama adeegyada aad booqaneyso.
Waxaan joojin karnaa ama u hakin karnaa helitaanka adeeggeena isla markiiba, iyada oo aan lahayn ogeysiis ama masuuliyad hore, sabab kasta ha ahaato, oo ay ku jirto xaddidaad la'aan haddii aad jebiso Shuruudaha.
Dhammaan qodobada Shuruudaha dabiiciga ah ee ka baxaya joojinta waa inay ka baxaan joojinta, oo ay ka mid tahay, aan xadidnayn, shuruudaha lahaanshaha, khasaarihii damaanad-qaadka, damaanad qaadka iyo xaddidaadda mas'uuliyadda.
Waan joojin karnaa xisaabtaada si dhakhso ah, iyada oo aan lahayn ogeysiis ama masuuliyad hore, sabab kasta ha ahaato, oo ay ku jirto xaddidaad la'aan haddii aad jebiso shuruudaha.
Marka la joojiyo, xaqa aad u leedahay isticmaalka adeegga ayaa isla markiiba joojin doonta. Haddii aad rabto inaad joojiso koontadaada, waxaad si fudud u joojin kartaa Adeegga.
Isticmaalkaaga Adeeggu wuxuu ku jiraa halistaada kaliya. Adeeggu wuxuu ku saleysan yahay "AS IS" iyo "AS AVAILABLE". Adeegga waxaa la siiyaa iyada oo aan lahayn damaanad nooc kasta ah, ha ahaato ama ha ahaato ama ha ahaato, oo ay kujirto, laakiin aan ku xaddidnayn, dammaanad-qaadyada la macneeyay ee ganacsiga, taam ahaanshaha ujeedo gaar ah, ku-xad-gudub la'aan ama koorsada waxqabadka.
Shuruudahan waxaa lagu maamuli doonaa loona dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda Mareykanka iyada oo aan loo eegeynin khilaafkooda sharciga qaanuunka.
Ku guuldareysigeena inaan hirgelino xuquuq kasta ama bixinta shuruudahaas lama tixgelin doono ka-dhaafitaanka xuquuqdaas. Haddii shuruudaha shuruudahaas loo hirgeliyo inay noqdaan kuwo aan sharci ahayn ama aan awood u lahayn maxkamadda, qodobada soo hadhay ee Shuruudahaasi waxay ahaanayaan kuwo hirgalay. Shuruudahani waxay ka dhigan yihiin dhammaan heshiis noo dhexeeya oo ku saabsan adeeggayaga, waxaanu bedelnaa oo aan bedeli doonaa heshiisyada hore ee laga yaabo in aan naga dhexeeyo ee ku saabsan Adeegga.
Waxaan xaq u leenahay, si ikhtiyaari ah, inaan wax ka badalo ama badalno Shuruudahaan wakhti kasta. Haddii dib-u-eegis uu yahay wax aan isku dayno waxaanu isku dayi doonaa inaanu ugu yaraan ogeysiino 15 ka hor intaan wax shuruudo cusub ah samayn. Maxaa ka tarjumaya isbeddel mug leh ayaa lagu go'aamin doonaa go'aankayaga kali ah.
Adiga oo sii wadaya helitaanka ama isticmaalka adeegyadeena kaddib marka dib-u-habeyntaas ay noqdaan mid wax ku ool ah, waxaad ogolaatay in lagu xiro shuruudaha dib loo eegay. Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha cusub, fadlan jooji isticmaalka adeegga.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid shuruudahan, fadlan nala soo xiriir.
DutchtownSTL.org Shuruudaha iyo Xaaladaha